China Eco-solvent Glitter Silver Daabacan PU Flex saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Alizarin
Soo dejiso & FAQs
Ganacsatada Ku biir
Eco-Solvent Flex Daabacan
Waraaqda Wareejinta Khadka Jet
Waraaqda Wareejinta Khadka Jet-ka (Iron-on)
Waraaqda Wareejinta Khadka Jet (miiska la jaray)
Warqadda Wareejinta Jet-ka Qad Wayn (miiska la jaray)
Warqadda Wareejinta Midabka
Kala beddelka kulaylka ee la gooyn karo
Madbacadaha Qaybinta Idman
Eco-solvent Glitter Silver Daabacan PU Flex
Koodhka Alaabta: HTS-300SGL
Magaca Alaabta: Eco-Solvent Glitter Silver Daabacan PU Flex oo leh saamaynta dhalaalka xiddigta
50cm X 30M/ Roll.
Wanaagsanaanta Khadka: Khad dareere ah, Eco-Solvent Max, khad khafiif ah, khad BS4, khad caag ah iwm.
Online weydii Soo deji PDF
Eco-Solvent Glitter Silver Daabacan PU Flex waxaa daabici kara dhammaan noocyada Eco-Solvent inkjet printer, hel adkeysi weyn oo leh midab sawir leh, dhaq-dhaqashada kadib.Ku qurxin maro sawirro ah daqiiqado gudahood.Xabagta dhalaalaysa ee cusub waxay ku habboon tahay in lagu wareejiyo dunta sida suufka, isku dhafka polyester/suuf iyo polyester/acrylic, Nylon/Spandex iwm.Waxay ku habboon tahay in la habeeyo funaanado madow, ama midab khafiif ah, bacaha shiraac, ciyaaraha & xirashada madadaalada, lebbiska, xidhashada baaskiilka, maqaallada xayeysiinta iyo wax ka badan.oo leh dhabarka birta dhalaalaysa ee PU Flex la daabici karo, ka dib daabacaadda & wareejinta, midabka waxaa lagu beddeli doonaa saamaynta birta dhalaalaysa.
■ Ku beddel marada sawirada aad jeceshahay iyo sawirada midabka.
■ Loogu talagalay natiijooyin muuqda suuf madow, caddaan ama midab khafiif ah ama suuf / polyester-ka la isku daray
■ Ku habboon shakhsiyaynta funaanadaha, bacaha shiraac, bacaha shiraac, lebbiska, sawiro ku dul-jilaato iwm.
■ Si fiican loo dhaqi karo oo midabkaaga ilaali
■ Jilicsan oo aad u lallatisan
Waxaa lagu daabici karaa dhammaan noocyada Eco-Solvent inkjet printer sida: Roland Versa CAMM VS300i/540i, VersaStudio BN20, Mimaki JV3-75SP, Uniform SP-750C, iyo daabacadaha kale ee Eco-solvent inkjet iwm.
1).Dejinta kulaylka 165 ° C ilaa 25 sekan adigoo isticmaalaya cadaadis dhexdhexaad ah.
2).Si kooban u kululee marada 5 ilbiriqsi si aad u hubiso inay si buuxda u siman tahay.
3).U daa sawirka daabacan si uu u engego qiyaastii.5 daqiiqo, jar sawirka geesaha.Si tartiib ah uga sil xariiqda sawirka warqadda gadaale adigoo isticmaalaya filim polyester-ka koolo leh (TF-100).
4).Dhig xarriiqda sawirka oo u jeedda xagga sare ee dharka bartilmaameedka ah
5).Dusha marada suufka ah.
6).Ka dib markaad wareejiso 25 seonds, ka qaad dharka suufka ah, ka dibna qabooji ilaa dhowr daqiiqadood, Peel filimka polyester-ka koollada ah oo ka bilaabmaya geeska.
7. Tilmaamaha Dhaqidda:
Ku dhaq gudaha gudaha BIYO Qabow.Ha isticmaalin bleaCH.Geli qalajiyaha ama ku dheji si aad isla markiiba u engejiso.Fadlan ha kala bixin sawirka la wareejiyay ama funaanadda maxaa yeelay tani waxay sababi kartaa dildilaac ama laalaabku, fadlan dhig xaashida dufanka leh ee wareejinta iyo kulaylka ama birta dhowr ilbiriqsi si aad u hubiso si adag mar kale ugu cadaadi wareejinta oo dhan.
Fadlan xusuusnow inaadan si toos ah birta ugu dhicin dusha sawirka.
Maareynta Walxaha & Kaydinta: xaaladaha 35-65% Qoyaanka Qoyaanka iyo heerkulka 10-30°C.
Kaydinta baakadaha furan: Marka baakadaha furan ee warbaahinta aan la isticmaalin ka saar duubka ama xaashida daabacaha ku dabool duubka ama go'yaasha bac si aad uga ilaaliso wasakhda, haddii aad ku kaydinayso dhamaadka, isticmaal furka dhamaadka oo ku dheji cidhifka si aad uga hortagto waxyeelo soo gaadho cidhifka duubidu ha dhigin walax fiiqan ama culus duub duuban oo aan ilaalin oo ha ku rarin.
Hore: Eco-solvent Birilliant Dahab Daabacan PU Flex
Xiga: Filimka Daahsoon ee Eco-Solvent InkJet
Eco-Solvent Vinyl Daabacan
Eco-solvent Birilliant Dahab Daabacan PU Flex
Eco-solvent Metallized Daabacan karo PU Flex
Xuquuqda daabacaadda © 2022 Alizarin daahan co. Ltd |Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin